Art Kenduru Fekiti | China Art Kenduru Vagadziri uye Vanotengesa
Zita: Tengesa rinonaka Regedi mazai kenduru rei saizi Kukura: 5 * 4.1cm Packaging: 300pcs / katoni, Iyo Iro kenduru mazai kenduru yakagadzirwa nehupamhi hweparafini wax uye machira ekotoni, isina-chepfu uye isina utsi. Isu tinokwanisa kuendesa akasiyana siyana mavara Evha yezai kenduru sekudiwa kwako, shandisa Pasika yea kenduru kuti ucherechedze zuva reIsita.
Wholesale kunhuhwirira tangerine orange chimiro kenduru
Izita: Wholesale scents tangerine / orenji chimiro kenduru Kukura: 7 * 6cm Packaging: 100pcs / katoni, Iyo tangerine / orenji chimiro kenduru yakagadzirwa nemhando yepamusoro yeparafini wax, iyo kenduru yakagadzirwa nemaoko. Mafuta akakosha anonyanya kutumirwa kunze maaromatherapy maoiri. Yakanaka kwazvo uye yakapfava michero yemichero inogona kuiswa mumba yekutandarira uye yekurara. Izvo zvichave zvichidikanwa sechipo kushamwari, amai, musikana shamwari uye hanzvadzi.
Wedzera mwana mucheche chimiro kenduru yekushongedza keke yekushongedza
Zita: Wopa mucheche chimiro pekeke rekuzvarwa keke yekushongedza Kukura: 9 * 6 * 6CM Kurema: 65g Packaging: 100pcs / katoni, Iyo yekurara yemucheche chimiro chekusununguka kenduru yakanaka kwazvo kushongedza keke yekuzvarwa. Iyo kenduru ine mukomana nemusikana, Kana mwana wako achipemberera zuva rekuzvarwa, unogona kurishandisa kurongedza.
kenduru tapa kenduru, kenduru, nyuchi dzinovhota makenduru, kenduru yenyuchi, votive kenduru, nyuchi mbiru,